wadanka kastaa wuxuu leeyahay nidaam dugsi oo kala duwan. Baro sida aad u qiimeeyaan kartaa nuqulo shisheeye si ay u awoodaan si ay u isticmaalaan waxbaridda hore ee dalka Mareykanka.
Wargeyska ayaa ku taxan saf ka helay dugsiga sare ama jaamacadda. Dadka intooda badan ka heli iyaga ka dib markii qalin jebinta. sida caadiga ah Waxaad codsan kartaa in qoraalka dheeraad ah shisheeye ka dugsiga.
qiimaynta Waxbarashada waxaa ay sameeyeen shirkadaha turjumi aad qoraalka iyo aad raadineyso weeyna. Waxaa la go'aamiyey in waxbarashada aad heshay ee dalka waa isku mid ama la mid ah oo dalka Mareykanka ah.
Dugsiyadu waxay isticmaalaan nidaamka American iyo jaamacadaha Aatmadia (credit). Waxay u xisaabin tirada loo xilsaaray Dabcan category ama tababar kasta. Sida caadiga ah, fasalada u 2-3 credits. Ka hor inta aadan u qalin jebiyaan, aad leedahay si aad u hesho a total credits qaarkood.
degree Sayniska waa shahaado ka jaamacad ama kulliyad.
Qiimeynta kala go'idda ama wareegga wareegga: deggan Text u muuqataa in nuqulo shisheeye si ay u arkaan saf oo dhan qaaday mid mid. Waxay jeclaan lahaa inuu arko haddii ay fasalka in aad ka dhigay mid yihiin kuwa loo baahan yahay in Maraykanka. Waxaa loo sameeyaa marka aad rabto in aad hordhaca ah ee kulliyadda. Sida caadiga ah ku kici u dhexeeya 150 Oo 200 dollar.
rating Guud: deggan Text u muuqataa in nuqulo shisheeye si ay u arkaan in degree aan ka dalka aad ka soo jeedo helay waa shahaadada degree mid ah Maraykanka. Tan waxaa badanaa la sameeyaa marka horumarka shaqada. kharashka ku saabsan 400 dollar.
Adeegyada Waxbarashada Global
Dadka deegaanka Alaatmadion Barayaashu
Dadka deegaanka ee shirkadda lacagta adduunka
Can Global Upwardly Caawiyo in aad la qabsan kartaa xirfadaha iyo waxbarashada oo wadada shaqo shaqo hore ee ciidamada Maraykanka oo muujiyaan qiimaha waayo-aragnimo ah ee loo shaqeeyaha.
Resources xarunta qaxootiga ee internetka